အားလုံးအံ့ C ဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်Unာiverseာလမ်းကြောင်းများ - Infinity Saga [2008-2019 / Deluxe Edition]
Stan Lee ၏ Loving Memory ၌တည်၏
(12/28 / 1922-11 / 12/2018)
နောက်တွဲယာဉ်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် MCU ကိုပြန်လည်အတွေ့အကြုံပြန်ရယူလိုက်ပါ။
၁၁ နှစ်တာအောင်မြင်သောရုပ်ရှင် ၂၃ ခုသည်ဤရုပ်ရှင်ပွဲတော်သို့ ဦး ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
The Marvel Cinematic Universe သည်အမေရိကန်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Marvel Comics မှထုတ်ဝေသောအမေရိကန်ရုပ်ပြစာအုပ်များတွင်ပါ ၀ င်သောဇာတ်ကောင်များအပေါ် အခြေခံ၍ လွတ်လပ်သော Marvel စတူဒီယိုများမှထုတ်လုပ်သောစူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်ကားများအပေါ်ဗဟိုပြုသည့်မျှဝေထားသောစကြဝuniverseာဖြစ်သည်။
ရုပ်ရှင် (မ်ား): အံ့ C ဖွယ်ရာရုပ်ရှင်ဝiverseာရုပ်ရှင်
ဖန်တီးသူ: Marvel စတူဒီယိုများ
ရုပ်ရှင်တို - Marvel One-Shots
ရုပ်ပြ: အံ့ C ခြင်းရုပ်ရှင်ရုံiverseာ; ရုပ်ပြ
ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲ - Marvel Cinematic Universe ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီး
၁။ Iron Man (၂၀၀၈)
3. Iron Man2(၂၀၁၀)
၅။ Captain America - ပထမသေစားပေးသူ (၂၀၁၁)
7. Iron Man3(၂၀၁၃)
၈။ Thor: The Dark World (၂၀၁၃)
၉။ Captain America - ဆောင်းရာသီစစ်သား (၂၀၁၄)
၁၀။ Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ (၂၀၁၄)
၁၁။ Avengers: ခေတ်၏ Ultron (၂၀၁၅)
12. Ant-Man (၂၀၁၅)
၁၃။ Captain America - ပြည်တွင်းစစ် (၂၀၁၆)
၁၄။ ထူးဆန်းသောဆရာဝန် (၂၀၁၆)
၁၅။ Galaxy Vol ၏အုပ်ထိန်းသူများ။ ၂ (၂၀၁၇)
၁၆။ Spider-Man - အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ (၂၀၁၇)
၁၇ Thor: Ragnarok (၂၀၁၇)
၁၉ ။ Avengers: Infinity စစ်ပွဲ (၂၀၁၈)
20. Ant-Man နှင့် Wasp (၂၀၁၈)
၂၁။ Captain Marvel (2019)
၂၃ ။ Spider-Man - ဝေးဝေးနေ (၂၀၁၉)
MCU ၏ပထမဆုံး Iron Man (2008) သည် crossover ရုပ်ရှင် The Avengers (2012) တွင်အစပြုခဲ့သည့်ပထမ ဦး ဆုံးအဆင့်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အဆင့် (၂) ကို Iron Man3(၂၀၁၃) မှစတင်ခဲ့ပြီး Ant-Man (၂၀၁၅) နှင့်နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။ အဆင့် (၃) သည် Captain America: ပြည်တွင်းစစ် (၂၀၁၆) နှင့်စတင်ခဲ့ပြီး Spider-Man - Far From Home (2019) နှင့်အဆုံးသတ်ရန်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဂိမ်း၏ပထမအဆင့်သုံးခုကို Infinity Saga ဟုလူသိများကြသည်။ ၂၀၁၃-၁၄ ရုပ်မြင်သံကြားရာသီတွင် Marvel Television သည် ABC ရုပ်မြင်သံကြား Marvel's Agents of SHIELD နှင့်ကွန်ရက်ရုပ်မြင်သံကြားသို့ကျယ်ပြန့်စွာချဲ့ထွင်ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Netflix တွင် Marvel ၏ Daredevil နှင့် ၂၀၁၇ တွင် Marvel's Runaways မှ Hulu တွင်အွန်လိုင်းလွှင့်ခြင်း၊ ထို့နောက် Marvel's Cloak & Dagger on Freeform ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၌တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Marvel Television သည်ဒီဂျစ်တယ်စီးရီး Marvel's Agents of SHIELD: Slingshot ကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Soundtrack အယ်လ်ဘမ်များကိုရုပ်ရှင်အားလုံးနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးများအတွက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး၊ ရုပ်ရှင်များတွင်ကြားခဲ့ရသောရှိပြီးသားဂီတပါ ၀ င်သည့်စုပေါင်းအယ်လ်ဘမ်များကိုထုတ်လွှင့်သည်။ MCU တွင် Marvel Comics မှထုတ်ဝေသောတွဲဖက်ကာတွန်းများလည်းပါဝင်သည်။ Marvel Studios သည်တိုက်ရိုက် - ဗွီဒီယိုတိုတိုရုပ်ရှင်ကားများနှင့်၎င်း၏ရုပ်ရှင်နှင့်စကြဝforာအတွက်ဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှု WHIH Newsfront နှင့်အတူထုတ်ဝေခဲ့သည်။
အချို့သောဝေဖန်သူများကမူရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲများသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့်စကြဝuniverseာတွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုဝေဖန်သူများကတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်းအဆိုပါဂိမ်းသည်စီးပွားဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အခြားရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယိုများအားတူညီသောမျှဝေထားသောစကြာ ၀ esာများဖန်တီးရန်ကြိုးပမ်းရန်ရုပ်ပြစာအုပ်ဇာတ်ကောင်လိုက်လျောညီထွေမှုအခွင့်အရေးများကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ MCU သည်ဝေကြးသောစကြာ ၀ ofာပြင်ပရှိအခြားမီဒီယာများ၏အဓိကအာရုံစိုက်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဝစ္စနီဒစ္စပန်းခြံနှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ၏ဆွဲဆောင်မှုများ၊ Discovery Times Square, Queensland Modern Gallery ပြပွဲ၊ ရုပ်မြင်သံကြားအထူးရုပ်ရှင်နှစ်ခုနှင့်ရုပ်ရှင်တစ်ခုစီအတွက်လမ်းညွှန်စာအုပ်များဖြစ်သည်။ , မျိုးစုံလည်စည်း -in ကိုဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်ကြော်ငြာ။
Avengers အကြောင်း: Endgame
Avengers: Endgame သည် Marvel စတူဒီယိုမှထုတ်လုပ်ပြီး Walt Disney Studios Motion Pictures မှဖြန့်ချိသည့် Marvel Comics စူပါဟီးရိုးအဖွဲ့ Avengers ကို အခြေခံ၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အမေရိကန်စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် The Avengers၊ ၂၀၁၅ Avengers: Age of Ultron နှင့် 2018's Avengers: Infinity War နှင့် ၂၂ ကြိမ်မြောက်ရုပ်ရှင် Marvel Cinematic Universe (MCU) တွင်နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ Christopher Markus နှင့် Stephen McFeely တို့ရေးသားခဲ့သည့် Anthony နှင့် Joe Russo တို့၏ဒါရိုက်တာနှင့် Robert Downey Jr. Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson တို့ပါဝင်သည်။ ၊ ကရင် Gillan၊ Danai Gurira၊ Bradley Cooper နှင့် Josh Brolin ။ ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ကျန်ရှိနေသေးသော Avengers အဖွဲ့ဝင်များနှင့်သူတို့၏မဟာမိတ်များသည် Infinity စစ်ပွဲမှ Thanos ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြသည်။
အခွင့်အရေးအားလုံးသည် Marvel စတူဒီယိုများ၊ Paramount Pictures ရုပ်ပုံများ၊ Walt Disney၊ Universal ရုပ်ပုံများ၊
Valhalla Motion Pictures, Columbia Pictures နှင့် Sony Pictures
#AvengersEndgame #SpiderManFarFromHome #RIPStanLee #MCU #IronMan #Hulk #CaptainAmerica #BlackWidow # 2019
အားလုံးအံ့ C ဖွယ်ရုပ်ရှင်ရုံiverseာလမ်းကြောင်း - Iron Man (2008) မှ Avengers: Endgame (2019)
Deadpool2- အကောင်းဆုံးအချိန်များ
The Amazing Spider-Man 1 &2- သင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်တာထက်ပိုဆိုးသည်
သက္ကရာဇ်စဉ်အလိုက် MARVEL ရုပ်ရှင်စကြဝ*ာ * နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု *
သက္ကရာဇ်စဉ်အရ MARVEL ရုပ်ရှင်ကားအားလုံး [MCU TIMELINE]
THE INFINITY SAGA: Endgame သို့သွားမည့်လမ်း - အံ့ဖွယ်ရုပ်ရှင်ရုံiverseာနောက်ကြောင်းပြန် (2008 - 2019)
Loki: အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းများ၊ လိုင်းများနှင့်ရယ်စရာကောင်းသောအချိန်များ (Thor 1-Infinity War)
MCU HISHE စုစည်းခြင်းအတွဲ ၃
အားလုံး MARVEL CINEMATIC UNIVERSE Trailers: Iron Man (2008) to Black Widow (2021)
Thor: Ragnarok | အားလုံးထုတ်ပေးသောအပိုဆုလက္ခဏာများ [Blu-Ray / DVD 2018]
Avengers: IMAX တွင်eningပြီလ ၂၅ ရက်၊
တစ်ချိန်ကအံ့ C ခြင်းရုပ်ရှင်ရုံiverseာ၌ပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ရှင် 20